Hubinta tayada ee PVC dahaarka 3d welded silig mesh silig
Hubinta tayada ee PVC dahaarka 3d alxanka silig mesh alxanka Cabirka iyo kormeerka dhexroorka siligga xayndaabka mesh silig: Dhexroor silig: 5.3mm Hole: 60x200mm Cabbirka: 2000x2440mm Natiijo: uqalma. ...
Shixnad: 20 Metric ton oo shabaggeedii bir birta ah oo diyaar u ah rarka iyo keenista mashruuca maxalliga ah ee Shiinaha
Rarista 28, Juun: 20 Metric ton oo shabaggeedii bir ah oo galvanized ah oo diyaar u ah soo dejinta iyo keenista Alaabta: Xajmiga Mashiinka Mashiinka: U jar si aad u qaabeysid, oo leh baarka isku xira. cabirka variuos. Dusha sare: Muuqaalka kulul ee galvanized status: on loading for delivery Ujeeddo: isticmaalka marinka marinka. ...
Hubinta Goobta Kadib Markii Shabaggeedii Birta Ahaa Loo Geeyey Si Loo Dhigo
Maalintii shalay, badeecadaha birta birta ah waxay ku rarnaayeen gawaari xamuul ah waxayna bilaabeen safarkooda inay la kulmaan milkiilaha. Product: shabaggeedii steel dusha: Qoob-kulul Hot qeexitaanka: tirada kala duwan: 780 metrik tan Mashruuca: Dhismaha warshadaha ...
Alxanka shabaggeedii bir alxanka 30x3mm nooca bar cad ku shuban markab 40GP ah oo u socda Algeria 2021/6/10
Alxanka shabaggeedii bir alxanka 30x3mm nooca bar cad ku shuban maraakiibta 40GP ee Algeria 2021/6/10 Sii soconaya shalay, weelka labaad ee 40GP oo ku raran weel maanta oo bilaabay inuu u rarto si ay ula kulmaan milkiilaha. Product: shabaggeedii steel Type: bir cad ...
Electro Forged alxanka shabaggeedii biraha loading biraha qaawan weel iyo u rarida Algeria 2021/6/9
Electro Forged alxanka shabaggeedii bir bir qaawan loading weel iyo rarka Algeria 2021/6/9 Weelkii ugu horreeyay ee amarka ee macmiilka Aljeeriya ee alaabada birta birta ah ayaa hadda ku jira weel. Si naxariis leh uga fiirso rarka macmiilka ...
Ka fogee Peter Cottontail deyrkaaga iyo beertaada
Nasiib darrose, bakayleyaashu marar dhif ah ayay ku dhaqaaqaan shaqo joojin, beertayada ubaxdeena, beerta khudradda iyo muuqaalka dhulku waxay ku siinayaan khudradda isku dhafan oo macaan. Xilliga jiilaalka, ka dib markii laamaha qaawan ay khafiif yihiin, bakaylaha ayaa u gaajaysan wax kasta oo beerteennu bixin karto. H ...
Shiinaha PPI: Tusaha Qiimaha Soosaaraha - Raw materail
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay ee ay soo saartay Xafiiska Tirakoobka Qaranka, Bishii Maarso 2021, qiimaha warshad qaran ee soosaarayaasha warshadaha (PPI) ayaa kordhay 1.6% bil-bil-bil ah, taas oo ah tan ugu sareysa tan iyo bil-bil-bil xogta (2002 ilaa hada); Bishii Maarso, PPI waxay kor u kacday 4.4% sanad-ka-...
Buug-yaraha sheyga wax lagu xoqo ee FRP
Khariidadda shaashadda jiingada ee FRP: nooca la shubay, nooca buluugga ah, nooca ugu sarreeya ee la madoobaaday, shaashadda frp oo leh nooca saxanka daboolka iyo liiska miisaanka maaddada maaddada fiberglasska shaashadda Fiberglass shabaggu wuxuu leeyahay awood xamuul oo xambaarsan weyn, xooggooda iyo foorarsigooduna waxay ka sarreeyaan 600Mpa. Caabbinta daalku waxay qiyaastii tahay 50 jeer kan s ...
In kasta oo inbadan oo naga mid ah ay si walaac leh u sugayaan maalinta aan balan ka qabsan karno tallaalka COVID-19, maalintani waa laga soo hor mari karaa intaad u maleynaysid. Gudoomiyaha Gavin Newsom (Gavin Newsom) wuxuu sheegay in laga bilaabo Abriil 15keeda, dhamaan dadka reer Californianka ah ee jira 16 sano iyo wixii ka weyn ay balan ka sameysan karaan COVID ...
by idaacadda Subaxnimo 21-03-03
Jimcaha, Febraayo 26, 2021 waa xafladda siraad loogu talagalay dadka Shiinaha oo dhan. Waa iid farxadeed. Gaar ahaan habeenku waa soo jiidasho. Maalintan, dadku waxay sudhaan laambadda, oo halxiraale ayey hoosta ka dhigaan. Kadib ciyaarta ayaa imaaneysa: mala-awaal halxidhaa! Qofka qiyaasaya halxidhaalaha saxda ah wuxuu ...
Qiimaha Qalabka Cagaaran ee Birta Ah Sii Kordhi.
Tan iyo bilowgii sanadkan, alaabta ceyriinka ah sida alwaax, isbuunyo, walxaha kiimikada lagu dahaadho, biraha aan birta ahayn, iyo xitaa kartoonada ayaa kor u kacayay, qiimaha qeybaha qaarna xitaa wuu laba jibaarmay. Tusaale ahaan, biraha aan birta ahayn waxay kor u kaceen qiyaastii 50%, iyo poly-ether xumbo jilicsan, muhiim ...
Shabaggeeda steel, FRP shabaggeeda, Welded Iron Factory Factory
Hebei Weijia MetalMesh Co., Ltd waa cilmi-baaris, horumarin, soo-saar, iibin iyo adeeg ee shirkadaha farsamada sare. Waxaan nahay bir mesh dhaqaajiya ugu horeysay ee Shiinaha. Waxaan ku leenahay faa iido aad u wanaagsan noocyada kala duwan ee deyrka, sida, xayndaabka xabsiga, xayndaabka garoonka, xayndaabka tareenka, xayndaabka go'doominta; bir g ...
Jeegga tayada for PVC dahaarka leh 3d wi welded ...
Rarista: 20 metrik ton oo ste galvanized ...
On Site Hubinta Ka dib markii our Steel shabaggeeda ...
Shabaggeedii steel Alxanka Manx 30x3mm pl ...
Electro been abuur shabaggeedii bir qaawan ...